စကျတငျဘာ 10, 2018 – Healthy Life Journal
၊ လရိပ်မေ ၊ ကိုရီးယားမင်းသမီးချွဲဂျီဝူးဟာ အသက် ၄၂နှစ်ရှိပေမယ့် အသားအရေ တင်းရင်းလှပပြီး ခန္ဓာကိုယ်အလှကိုလည်း ထိန်းထားနိုင်ဆဲပါ။ သူရဲ့ ကျန်းမာလှပတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကိုအခုလို သိရပါတယ်။ (၁) ဂျင်ဆင်းလက်ဖက်ရည်ကြမ်းကို နေ့စဉ်သောက်ခြင်း အေးမြတဲ့ အရပ်ဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအတွက် ဂျင်ဆင်းလက်ဖက်ရည်ကြမ်းက နွေးထွေးစေပါတယ်။ ချွဲဂျီဝူးက...
အလုပ်လုပ်ရင်း ကိုယ်အလေးချိန် မြင့်တက်လာရသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းငါးရပ်
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အထိုင်များတဲ့ အလုပ်လုပ်သူတွေက ကိုယ်အလေးချိန်တက်တဲ့ ပြဿနာကို မလွဲမသွေ ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်ပြီး နာရီပေါင်းများ စွာအလုပ်လုပ်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ သက်ရောက်မှုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အကြောင်းရင်း (၁) ဗိုက်ပြည့်ပေမယ့်လည်း အဖော်ကောင်း ရင်လိုက်စားဖြစ်ခြင်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲ၊...
မွေးဖွားပြီးပြုပြင်ခြင်း (Repair after delivery)
(ကန်တော့ပါ) မေး. ဆရာကျွန်မ အသက် ၂၄ နှစ်ပါ။ ကိုယ်ဝန် ၃ လထဲမှာပါ။ ကလေးမွေးတဲ့အခါ ရိုးရိုးမွေးရမလား၊ ခွဲမွေးရမလား ဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲနေပါတယ်ဆရာ။ အဒေါ်ဖြစ်သူက ခွဲမွေးခိုင်းပါတယ်ဆရာ။ မိဘတွေကတော့ အသက်ငယ်သေးတော့ ရိုးရိုးပဲမွေးခိုင်းပါတယ်ဆရာ။ အဒေါ်နဲ့သူငယ်ချင်းတွေကခွဲမွေးပါတဲ့။ ရိုးရိုးမွေးတာက မိန်းမကိုယ်အင်္ဂါကျယ်သွားပြီး အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ...
ရှင်းပြပါဆရာ . . . (၅) “ အိပ်ဆေးစွဲခြင်းအကြောင်း”
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) စာရေးသူ ကုသခဲ့တဲ့လူနာတွေ၊ လူနာရဲ့ မိသားစုဝင်တွေ၊ ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေ၊ စိတ်ကျန်းမာရေး သင်တန်းသားတွေနဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ က သူတို့သိချင်တဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကို မေးမြန်းလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်လည်စဉ်းစားပြီး “ ရှင်းပြပါဆရာ”...
၊ လရိပ်မေ ၊ စံတော်ချိန်ဇုန်မတူတဲ့ အရပ်ဒေသကို လေယာဉ်အကြာကြီးစီးပြီး ခရီးနှင်ရ တဲ့အခါ Jet Lag လို့ခေါ်တဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဝေဒနာ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီဝေဒနာမရဘဲ လိုရာပန်းတိုင်ကို စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်စွာ ရောက်ရှိနိုင်ဖို့ အကြံပြုချက်တချို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ – ခရီးမသွားမီ တစ်ညလုံး...
အယ်လ်ကာလီပါတဲ့ အစာနဲ့ အက်ဆစ်ဓာတ်ပါတဲ့ အစာ
မေး။ ။ လူတစ်ယောက် ကျန်းမာသန်စွမ်းစေဖို့ အယ်လ်ကာလီဓာတ်ပါတဲ့ အစားအစာနဲ့ အက်ဆစ်ဓာတ်ပါတဲ့ အစားအစာစတဲ့ ဓာတ်နှစ်မျိုးကိုမျှတစွာ စားသုံးဖို့ လိုတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လိုအစားအစာတွေလဲဆိုတာ သိပါရစေ။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ ဖြေ။ ။ အယ်လ်ကာလီဓာတ်ပါဝင်မှုများတဲ့ အစားအသောက်တွေက ဟင်းနုနယ်ရွက်၊...
အထီးကျန်ခြင်းက အ၀လွန်ခြင်းထက် ဆိုးကျိုးပိုမိုသက်ရောက်
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဘရစ်ဂန်ယန်းတက္ကသိုလ်မှ သုတေသီတွေက လူများစွာပါဝင်တဲ့ လေ့လာစူးစမ်းမှု ၂ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပထမလေ့လာမှုက လူ ၃၀၀၀၀၀ ကျော်တို့ရဲ့ နေထိုင်မှုအချက်အလက်တွေကို စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ လူမှုဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသူတွေက အထီးကျန်သူတွေထက် စောစောသေဆုံးနိုင်ခြေ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျတာကို...